Dhisme Wadada Asphalt Dhismooyinka Dulmanaya Daadka | RayHaber | raillynews
HomeWADADAAsphalt NewsWaddada Asfalt Waddooyinka Dhismaha ee Caasimada ayaa la fatahay
30 / 03 / 2015 Asphalt News, tareenka, GUUD, WADADA, Headline
Wadada loo yaqaan 'Asphalt Road' ayaa ku burburtay Dhismooyinka caasimada: Fatahaada: Wadada laamiga ah ee ku teedsan xarunta tareenka ee Ivedik ee Ankara ayaa dumay roob da ’awgeed, ka dib markii ay jabeen dhuumaha weyn, dhismayaashii ku teedsanaa iyo jardiinooyinki ayaa daadadku.
Wadada laamiga ah ee ku teedsan xarunta tareenka dhulka hoostiisa ee Ivedik ee degmada Yenimahalle ee Ankara ayaa ku burburtay saameynta roobka. Burburkii kadib, ka dib jabkii dhuumaha weynaa, ayaa tiro tan oo biyo ah ay ka baxeen dhismayaashii ku hareereysan iyo jardiinooyinkii ay biyihii soo buux dhaafiyeen.
JIDKA WASHED, BILAASH weyn
Dhacdadu waxay ka dhacday Cem Ersever Street oo ku xigta xarunta tareenka dhulka hoostiisa ee Ivedik ee degmada Yenimahalle fiidnimadii. Dhinac keliya oo ka mid ah waddada ayaa u burburay roob da’ay maalintii. Burburkii ayaa sababay god weyn oo wadada dhexdeeda ah.
KHAMIISYADA XUQUUQDA IYO GALMADUHU WAA BIYAHA biyaha
Markuu asfoolka dillaacay, dhuunta ugu weyna way jabtay. Tobanaan biyo ah oo ka socda tuubbada weyn, wadada weyn ee dhismayaasha ka dhexeysa, ayaa sababay burburka darbiga dayactirka. Biyaha ka soo qulqulaya halkan ayaa ka tegey dabaqyada hoose ee dhismayaasha ku wareegsan iyo jardiinooyinka biyaha hoostooda ah.
Muwaadiniintu waxay isku dayeen inay nadiif noqdaan
Albaabka dhismayaasha qaar, muwaadiniintu waxay isku dayeen inay nadiifiyaan baararka. Gawaarida qaar ayaa la helay in ay quusteen. Shilka kadib, wadada ayaa u xirneyd labo wado oo isku socodka ah. Kooxaha degmada loo diray gobolka ayaa bilaabay shaqo.
108 ayaa sannad kasta daadad ahaan ku soo degtay tareenada New York
Gaadiidka Hereke ee Saldhigga, Duulimaadyada Joojiyay
Madaarka Osaka ayaa ku fatahay Japan
Shabeellaha Cusub ee Shabeellaha Cusub
Marmaray oo ka tagay Darica biyo!
Xarunta Kuleejada Ankara ee 2 ayaa ku soo fatahay maalmo
Ka shaqee wadada Wadada Lagu Daadho Beeraha Beeraha
Ankara Mamakta Asphalt Road Road
Wadada Asphalt ayaa burburay kadib roob culus oo ka da’ay Bursa
Warshadda Asphalt ayaa ku fatahay magaalada Zonguldak
Waddada lagu burburiyay dhismaha xariiqa xawaaraha sare
Buundada khatarta ah ee caasimadda ayaa loo xidhay gaadiidka waddada
Burdur Duqa Magaalada ayaa ku shubay asfalt la shaqeeya
Wadada Asphalt oo burburay
Wadada Elazığ ayaa ku dhufatay dhagax
Wadooyinka waa ka badbaado